हेर्नुहोस् राशिफल: आज सोमबार कुन-कुन राशिका लागि शुभ-अशुभ कस्तो छ ? - Internet Khabar
Home Rashifal हेर्नुहोस् राशिफल: आज सोमबार कुन-कुन राशिका लागि शुभ-अशुभ कस्तो छ ?
आज वि.सं. २०७६ कात्तिक २५ गते सोमबार तदनुसार इ.स. २०१९ नोभेम्बर ११ तारिख, कार्तिक शुक्लपक्ष चतुर्दशी तिथि हेर्नुहोस् राशिफल:
मेष : आज तपाईका लागि धनसँग जोडिएका कुनैपनि काम असफल ह’ने देखिन्छ । विद्यार्थीहरुका लागि हर तरहले उत्तम रहेको छ भन कुनै न कुनै समस्याले सताउने देखिन्छ।
वृष : पेटमा खराबी हुन सक्छ। तपाईको मनमा कुनै नकारात्मक कुराले डेरा जमान सक्छ । साथीको सहयोग प्रर्याप्त मिल्ने देखिन्छ भने कुनै प्रकारको लेनदेन नगर्नु राम्रो होला । तर नयाँ योजनाहरु बनाउन भने दिन शुभ देखिन्छ।
मिथुन : आज तपाई आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस् । घरका कुनैपनि सदस्यको स्वास्थ्यमा उतार चढाब आउन सक्छ। आजको दिन तपाईका लागि भने शुभ रहेको छ। आज परिवारबाट मिल्ने सुखमा भने कमी हुने देखिन्छ।
ककर्क : आज तपाईको दिन शुभ रहेको छ। सुख समाचार सुन्न पाईएला । भाग्यले साथ दिनेछ भने साँझपख बादविवादमा फस्ने देखिन्छ । धनका विषमा मनमुटाब हुन सक्छ।
सिंह : आको दिन कुनै विषयलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न हुनेछ। आज तपाईको योग्यता र बुद्धिमताको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। परिवार सुख, प्रममा सफलता मिल्ने योग रहेको छ।
कन्या : आज तपाई मानसिक र शारीरिक रुपमा मजबूद हुनुहुने छ । साँझपख नकारात्मक विचार हावी होला । नोकरी वा व्यापारमा कुनै वाधा अड्चन आउन सक्छ। परिवारको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ।
तुला : आज परिवारका सदस्यहरुसँग झगडा हुनसक्छ । तपाईको आत्माबल बढेर जानेछ भने ससुराली तर्फबाट कुनै खूशीको खबर आउन सक्छ । नयाँ योजना बनाउँदा ध्यान दिनुहोला ।
वृश्चिक : वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि आजको दिन सामान्य खालको रहेको छ। दोस्रो व्यक्तिको कारण तपाई विवादमा तानिन सक्नुहुन्छ। उच्च अधिकारीबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ भने आर्थिक लेनदेन गर्दा सावधानी अपनाउनु उचित हुनेछ।
धनु : कुनै दोस्रो व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्दा सफलता भन्दा असफलता बढि हात लाग्ने छ। यात्रामा साबधानी अपनाउनु बेस हुनेछ भने प्रेममा असफलता हात लाग्न सक्छ बोल्दा बिचार पुर्याउनुहोला ।
मकर : तपाईका लागि आजको दिन उतार चडाबले भरिएको छ। धन प्राप्त हुने छ भने तपाईको बोलीको प्रभावले अहिलेसम्म रोकिएका काम बन्ने योग रहेको छ। परिवारमा मनमुटाब हुने देखिन्छ।
कुंभ : तपाईको योग्यता र बुद्धिमताले सफलता हात लाग्ने छ । बैचारिक तालमेल खराब हुने देखिन्छ भने परिवारबाट शुभ समाचार सुन्न पाईएला । लामो दुरीका यात्रा हुने देखिन्छ।
मीन : आज घरमा खूशीको माहौल छाउने छ । घरमा शुभ काम हुने देखिन्छ भने आफन्तसँग मन मुटाब हुने योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा गडबडी, प्रेममा धोकाको सम्भावना छ । आज रात्रो रंगको बस्त्र लगाउनु तपाईका लागि शुभ देखिन्छ।
Previous articleएउटै वडामा अढाई करोडको केराखेती
Next articleबेसहारा सडक मानवमुक्त नगर अभियान